AFENO NY SERVICE PACK FOR WINDOWS XP SP3 - WINDOWS - 2019
Upgrade Windows XP amin'ny Service Pack 3
Service Pack 3 ho an'ny Windows XP dia package miaraka amina fanampim-panafahana sy famahana maro natao hanatsarana ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny rafitra miasa.
Afaho ny installer ary atsaharo ny Service Pack 3
Raha fantatrao, ny fenon'ny Windows XP dia tapitra tamin'ny 2014, noho izany dia tsy azo atao ny mikaroka sy manaparitaka ny fonosana amin'ny tranonkala ofisialy Microsoft. Misy fomba iray ahafahana mamela ny SP3 avy amin'ny rahona.
Download SP3 vaovao
Rehefa tapahana ny kitapo dia tsy maintsy apetraka amin'ny solosaina, dia hanao izany isika aoriana.
Ho an'ny fampiharana ara-dalàna ny fametrahana, mila farafahakeliny 2 GB malalaka ny habaka malalaka eo amin'ny fizaràna ny rakitra (ny lohan'ny "folder" Windows). Ny rafitra fiasa dia mety ahitana fanavaozana farany SP1 na SP2. Ho an'ny Windows XP SP3, tsy mila mametraka ny fonosana ianao.
Zava-dehibe iray hafa: ny fonosana SP3 ho an'ny 64-bit system dia tsy misy, toy izany koa ny fampivoarana, ohatra, ny Windows XP SP2 x64 amin'ny Service Pack 3 dia tsy hahomby.
Miomana ny hametraka
Tsy hahomby ny fametrahana ny fonosana raha efa nanamboatra ireto fanavaozana manaraka ireto ianao:
Kitapom-pampiasa ho an'ny fizarana ordinatera.
Fanaraha-maso multilingue ampiasaina ho an'ny mpampiasa Desktop Version 6.0.
Hiseho ao amin'ny fizarana serivisy izy ireo. "Manampy na manaisotra programa" in "Control Panel".
Mba hijery ireo fampahalalam-baovao voatahiry dia mila manamarina "Asehoy ireo fanavaozana". Raha voatanisa ireo fonosana voalaza etsy ambony, dia tokony hesorina izy ireo.
Ankoatra izany dia tsy maintsy esorina ny fiarovana ny viriosy rehetra, satria ireo programa ireo dia afaka misoroka ny fanovana sy ny fanaovana kopia ny antontan-taratasy ao amin'ny ordinatera.
Vakio bebe kokoa: Ahoana no hanaisotra ny Antivirus
Mamoròna teboka mamerina. Natao izany mba hahafahanao "miverina" raha misy diso na tsy fahombiazana aorian'ny fametrahana SP3.
Vakio bebe kokoa: Ahoana no hamerenana ny rafitra Windows XP?
Rehefa vita ny asa fanomanana, dia azonao atao ny mametraka ny fonosam-panompoana. Azo atao amin'ny fomba roa izany: avy amin'ny fampiasana Windows na mampiasa rakitra boot.
Jereo koa: Ahoana no hamoronana rakitra boot Windows XP
Fametrahana amin'ny birao
Ity fomba fametrahana SP3 ity dia tsy mitovy amin'ny fametrahana programa tsy tapaka. Ny hetsika rehetra tokony hatao eo ambanin'ny kaonty administratif.
Atsaharo ny rakitra WindowsXP-KB936929-SP3-x86-RUS.exe drakitra indroa, aorian'izay dia alefa ao anaty ordinatera ny rakitra ao anaty rakitra.
Mamaky sy manaraka ny soso-kevitra izahay, tsindrio "Next".
Avy eo, mila mamaky ny fifanekena momba ny lisansa ianao ary manaiky izany.
Mora haingana ny dingana fametrahana azy.
Rehefa vita izany, tsindrio ny bokotra. "Hatao". Tsy ilaina ny manao zavatra hafa, hanokatra ny ordinatera ny installer.
Aorian'izay isika dia hisedra ny hiandry ny fanavaozana hamita.
Ilainao ihany koa ny manapa-kevitra amin'ny famoahana ny fanavaozam-baovao ary tsindrio "Next".
Izany rehetra izany, ankehitriny dia miditra amin'ny rafitra araka ny mahazatra isika ary mampiasa Windows XP SP3.
Fidio amin'ny boot disk
Ity karazana fametrahana ity dia hamela anao hisoroka ny fahadisoana sasany, ohatra, raha toa ka tsy afaka manala tanteraka ny programa Antivirus. Mba hamoronana tabilao boot, mila programa roa isika - nLite (hampidirana ny fonosan'ny famoahana ao amin'ny fametrahana fametrahana), UltraISO (hanoratra ny sary amin'ny rakitra na USB flash drive).
Ho an'ny fampiharana ara-dalàna ny programa dia mila Microsoft .NET Framework version 2.0 na mihoatra.
Ampidiro ny rakitra amin'ny Windows XP SP1 na SP2 ao anaty fiara ary alaivo ny kopia rehetra ao anaty ordinatera efa noforonina. Mariho fa ny lalana mankany amin'ny lahatahiry, toy ny anarany, dia tsy tokony ahitana tarehintsy sirilika, ka ny vahaolana marina indrindra dia ny mametraka izany ao amin'ny fototry ny rafitra misy.
Raiso ny programa nLite ary ovaina ny fiteny ao amin'ny fikandrana voalohany.
Avy eo, tsindrio ny bokotra "Overview" ary misafidy ny ordinateranao.
Ny fandaharam-potoana dia hijery ireo rakitra ao amin'ny lahatahiry ary maneho ny mombamomba ny dikan-teny sy ny SP.
Ny varavarankely miaraka amin'ny presets dia tsy voafehy amin'ny tsindrio "Next".
Mifantina asa izahay. Amin'ny tranga misy antsika, dia ny fampidirana ny fonosam-panompoana sy ny famoronana sary boot.
Soraty eo amin'ny varavarankely manaraka ny bokotra "Select" ary manaiky ny fanesorana ny vaovao farany teo aloha tamin'ny fizarana.
mpanao gazety OK.
Jereo ny rakitra WindowsXP-KB936929-SP3-x86-RUS.exe ao anaty rakitra havanana ary tsindrio "Open".
Aorian'izay, ny rakitra dia afindra amin'ny installer.
Any amin'ny faran'ny dingana, tsindrio OK ao amin'ny boaty dialogue
ary avy eo "Next".
Mialà daholo ireo safidy rehetra, tsindrio ny bokotra "Mamorona ISO" ary misafidy ny toerana sy ny anaran'ny sary.
Rehefa vita ny dingana famoronana sary dia azonao atao ny manakatona tsotra izao ny programa.
Raha te hanoratra sary eo amin'ny CD dia atsaharo ny UltraISO ary tsindrio ny loko miaraka amin'ny rakitra mirehitra ao amin'ny soritsary ambony.
Mifidy ny fiara mitondra ny brenina isika, hametraka ny haavon'ny haavon'ny haavony, mahita ny sary noforonina ary manokatra izany.
Tsindrio ny bokotra rakitsoratra ary miandrasa azy hamita.
Raha mora aminao ny mampiasa flash flash, dia azonao atao ihany koa ny manoratra amin'ny media toy izany.
Vakio bebe kokoa: Ahoana no fomba hamoronana flash drive USB be mirefotra?
Ankehitriny dia mila bootana amin'io rakitra io ianao ary manatanteraka ny fametrahana amin'ny angon-drakitra mpampiasa (vakio ny lahatsoratra momba ny fanarenana ny rafitra, ny rohy izay ambara ao amin'ny lahatsoratra).
Ny fanamafisana ny rafitra opera Windows XP miaraka amin'ny Service Pack 3 dia hamela anao hampitombo ny fiarovana ny ordinateranao ary hampitombo ny fampiasana ny loharanon'ny rafitra. Ny torohevitra nomena ato amin'ity lahatsoratra ity dia hanampy azy hanao izany haingana araka izay azo atao.